IZINDAWO ZOKUPHOLISA ZOKUVIMBELA UYOVALWA
Yonga amanzi angaphezu kuka-30% nezindleko zokusebenza ngomshini opholile futhi osebenza kahle kakhulu. Ingena esikhundleni sokushintshana okuvamile okuphakathi kokushisa, ipompo yesibili, ukubhobhoza kanye nohlobo oluvulekile lokupholisa umbhoshongo ube yiYunithi eyodwa. Lokhu kusiza ekugcineni uhlelo luhlanzekile futhi neSondlo singenalutho.
Imikhumbi ye-SPL Refrigeration yenzelwe futhi yenziwa ngokwe-ASME Sec VIII Div. 1. Imikhumbi ene-ASME enesitembu iqinisekisa ukuthembeka okuphelele nokusimama esitshalweni seFriji. Ayigcini nje ngokuthuthukisa ukusebenza kahle kwamandla kohlelo, kepha futhi yehlisa nezindleko zokusebenza.